४० वर्षीया महिलाका ६९ सन्तान, कसरी सम्भव भयो ? - Pokhara News
अन्तर्राष्ट्रियरोचक / जानकारीसमाचार
४० वर्षीया महिलाका ६९ सन्तान, कसरी सम्भव भयो ?
एजेन्सी- गाजा, २१ भदौ । सामान्यतया दुई सन्तान जन्माउने योजना धेरै महिलाको रोजाइमा पर्छ ।
कतिपय आधुनिक महिला त एउटा सन्तान जन्माउन पनि झन्झट मान्छन् । तर, प्यालेस्टिनी एक महिलाले भने ६९ वटा सन्तान जन्माएकी थिइन्, त्यो पनि सानो उमेरमा । ४० वर्षमा ६९ सन्तान कसरी सम्भव भयो ? धेरैलाई यस्तो कौतुहलता लाग्न सक्छ ।